Maka sary an-tsaina ny endrika taotranon’ny abidy ao Karaiba · Global Voices teny Malagasy
Miezaka foana aho ny mamaritra [...] endrika karaibiàna
Voadika ny 31 Desambra 2021 19:30 GMT
Vakio amin'ny teny srpski, Español, Esperanto , English
Ny ABIDY natao endrika taotranon'ny ao Karaiba, nataon'ilay mpanakanto Nicholas Huggins. Sary Instagram nahazoana alàlana ny fampiasàna azy.
Vao haingana ilay Trinidadiàna artista sy mpamorona endrika, Nicholas Huggins, no nahavita andrana iray mahaliana. Misy tetikasa isantaona ety anaty tambajotra, antsoina hoe “36 Days of Type”, izay “nanasàna ireo mpamorona endrika, mpanaingo ary mpanao sary mba haneho ny fomba fahitàny manokana ny litera sy ny tarehimarika amin'ny endritsoratra latina” mandritra ny 36 andro mifanesy. Rehefa nandinika ireo fandraisana anjara tato anatin'ny taona vitsy lasa, nanapaka hevitra i Huggins ny hiatrika ilay fanamby amin'ny fanaovana zavatra hafa mihitsy—famoronana abidy miendrika taotrano ao Karaiba.
Tanaty antsafa tamin'ny alàlan'ny imailaka, niaiky i Huggins hoe satria “somary nampanahy azy ilay hamorona zavatra vaovao isanandro mandritra ny 36 andro”, te-hametraka masontsivana fanampiny izy ho an'ny fandikàny ny atao hoe litera: “Izany no nanànako eritreritra hanandrana hanao azy [ireny] amin'ny endrika taotranon'ny ao an-toerana.”
Ny vokatra dia andiany iray mampiseho ny fitenin'ny taotrano hatrizay tao Karaiba , ary hatramin'ny fanahiny mavitrika sy ny tantara, dingana iray niantomboka tamin'ny fandinihana. “Ao anaty findaiko dia manana tahirintsary iray aho ahitàna saripika maro nopihako rehefa ilay miato eny amin'ny jiro maroloko iny, na rehefa mandehandeha an-tongotra,” hoy i Huggins, ” ary ireny no nandrafitra ny fototra nakàko ny sasany amin'ireo singa. Indraindray aho eny am-pamiliana na tsy nitondra finday, araka izany, rehefa mahita zavatra aho dia raketiko ao an-tsaina izay zavatra hitako ary mampiasa teknika hafa aho mba hanampy ahy hitadidy azy, ary vantany vao tonga ao an-trano, dia manao soritsoritra momba izay zavatra hitako, na inona izay na inona.”
Nicholas Huggins miasa eo amin'ny iPad-ny mandrafitra ilay andiana abidy ao Karaiba. Sary natolotr'i Huggns tam-pitiavana, fampiasàna nahazoana alàlana.
Ho an'io tetikasa io, nataony sary tao anatin'ny fanaovany vakiraoka ireo litera rehetra, nampiasainy ny Procreate mba hanaingoana ny vokatra farany. Resaka fanatsarana endrika, nikaroka endrika maoderina izy, na dia manome voninahitra an'ireo tranobe lovam-pirenena ao an-toerana aza ny sasany amin'ireo sary, izay ny endrika taotrano amin'izany dia mirona mankamin'ny Baronial, toy izay hita amin'ny Trano mimandan'i Stollmeyer, na ny Ampira Indiàna, sy ny tamin'ny tranon'ny arsevekan'ny fiangonana katôlika romàna.
Ninian'i Huggins notapatapahana ireo zava-manamarika tahaka izany hita manodidina ny Queen's Park Savannah, ary tafiditra anatin'ireo Zavatra Fito Mahagaga indrindra ao Trinidad, miaraka amin'ireo tranobe somary hala tàhaka kokoa izay miresaka ny endrika kanton'ny fanamboarana any amin'ny faritra. “Amin'izay fomba izay,” hoy izy, “azon'ny olona alaina sary an-tsaina ny niainan'izy ireo manokana ka ampifandraisiny ireo fanaingoana sy ny fahatsiarovany manokana an'i Trinidad & Tobago ary raha hitarina dia ny ao Karaiba.”
Raha ny litera sasany dia mora navadika hanana endrika taotrano, nila nanosika lavitra ny fetran'ny fara-fahaizany kosa i Huggins mba haharesy lahatra kokoa ireo litera sarotra nomena endrika, toy ny fandokoany an'ilay Eric Williams Financial Complex ao Trinidad&Tobago, toerana misy ny Banky Foibe ao amin'ny firenena sy antsoina am-pitiavana hoe “ireo tilikambo kambana”, mba hanehoana ny litera X.
Zava-mahaliana, ilay sary dia afaka ihany koa adika ho toy ny tetezana iray mihantona na tetezana Bailey mihitsy, zavatra mahazatra ny mahita azy manerana ilay faritra.
Litera iray nametraka olana ny Z. “Tsy nanana hevitra mihitsy aho ny amin'izay tokony hatao,” hoy i Huggins manazava, “mandra-pahatongan'ilay maraina izay namiliako sy nandalovako teo anoloan'ny kianja iray fialamboly sy ny endrik'ilay tranovokoka (pavilion) izay nijoro toy ny Z no nahitàko azy … tamin'io fotoana io tao anatin'ny tetikasa, ny zotrako tsirairay dia nitondra ahy hihevitra ireo tranobe ho toy ny endrika litera tsy azo tsinontsinoavina.”
Ilay vakiraoka dia mitovy be ihany koa amina singa iray amin'ilay Hasely Crawford Stadium ao amin'ny Seranan'i Espaina, novolavolain'i Anthony C. Lewis, ilay mpahay maritrano tomponandraikitra nanao ireo Tilikambo Kambana.
Lazain'i Huggins fa ny litera tena sarotra indrindra ny nanome endrika azy dia ny V, na ohatra aza ka samy nametraka olana miavaka daholo “ny ankamaroan'ireo litera any amin'ny faran'ny ABIDY.”
Raha ny fandikàn'i Huggins an'ireo tohotra izay amin'ny ankapobeny dia hita any ivelan'ny trano ao afovoan-tanàna sy any atsimon'i Trinidad, maro amin'ireny no naorina ambony tsatoka, mampahatsiahy avy hatrany ny endrika karaibiàna, ilay tena ankafiziny dia ny fifangaroana teo amin'ny A, J na N.
Mazava laotra fa ny litera A no voalohany nataon'i Huggins ho an'ilay fanamby 36 andro, ary ambarany fa tonga tao anaty atidohany ilay fotokevitra, tamin'ny endrika “hevitra iray tena nadio nangatsakatsaka” tsy nilàna fotoana mba hanandramana hanakatra azy.
J dia manana dikany manokana ho azy satria mampahatsiahy azy ny toerana fivarotana voankazo ao an-tanànany, ary nandaniany fotoana betsaka kosa ny nanandrana hahatakatra ny antsipirihany ho an'ny N- angamba noho izy io fiandohan'ny fanampin'anarany, hoy izy – indrindra fa satria ilay tranon'ny Art Nouveau Boissiere House, izay soloiny tena, dia heverina ho singa iray mampiavaka ny taotrano nolovaina.
Amin'ny maha-andiany bambaray azy, dia toy ny fifangaroana taotrano sy ny fiteny ao amin'ny faritra ilay ABIDY omena endrika taotrano. “Ao anatin'ny asako, hoy i Huggins manazava, miezaka foana aho ny mamaritra na manakatra ny endrika karaibiàna. Ezahako ny hamoaka tsara azy amin'ny sary fanehoako sy amin'ny fampiharako ny fanomezana endrika:
Tena tokamiavaka ny taotrano ao Karaiba ary angamba zavatra izay raisina ho toy ny zavatra efa azo ho an'ny sarambabem-bahoaka. Na ireo loko hitantsika isanandro fotsiny aza no jerenareo, izay izy rehetra ireny dia samy safidy nataon'ireo tompony tsirairay avy, izany dia miteraka larona loko marevaka miparitaka eraky ny tanàna sy ireo vohitra; ary mazava loatra, manam-bintana isika fa ao ambadiky ny loko manga sy maitso ilay izy.
Amin'ny teny hafa, dia i Karaiba tena izy io. Jereo manontolo ireo andiany ao amin'ny Instagram na Facebook.